यी महिलाले जितिन् यस्तो युद्ध, बिनिन् विना जात र धर्मकी पहिलो भारतीय महिला
२०७५ फाल्गुण १० शुक्रबार, काठमाडौं । हाम्रो समाजमा धेरै किसिमका कुरीतिहरु छन् । समाजको एक हिस्सा भएको नाताले यसलाई अपनाउनु पनि हाम्रो बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई केहीले निभाउँछन् भने केही मानिस यसको विरुद्धमा उभिन्छन् । भारतको तमिननाडुकी स्नेहा पर्तिबराजा पनि कुरीतिको विरुद्धमा उभिएकी एक सशक्त नारी हुन् । उनी पेशाले वकिल हुन् । ... बाँकी अंश»
सडकमा सीम बेच्ने युवक: ४० अर्बका मालिक
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । भनिन्छ कि कुनै पनि मानिस केही फरक गर्ने प्रयास गर्छ भने सफल हुन्छ । केही नयाँ गर्न सकेको खण्डमा मात्र उसलाई अघि बढ्न निकै सहज हुने गर्छ । भारतका २५ वर्षीय रितेश कुमार पनि केही नयाँ सोचको कारण सफल व्यवसायी बनेका व्यक्ति हुन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो मन्दिर जहाँ प्रसादको रुपमा दिइन्छ बिर्‍यानी
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । सामान्यतया कुनै पनि मन्दिरमा प्रसादको रुपमा मिठाइ। फलफूल वा पक्वान्न दिइन्छ । भारतमा एक यस्तो मन्दिर छ, जहाँ परम्परागत रुपमा मनाइने एक उत्सवमा भक्तहरुलाई बिर्‍यानीको प्रसाद दिइन्छ । भारतको तमिननाडुको वडक्कमपट्टी नामक स्थानमा मुनियण्डी स्वामीको मन्दिरमा यस्तो प्रसाद दिइने गरिएको हो । ... बाँकी अंश»
कुमार केटाको अभाव भएको देश जहाँ विवाह गर्न वरको खोजीमा छन् हजारौ युवती
२०७५ फाल्गुण ९ बिहिबार, काठमाडौं । प्रत्येक केटीको युवावस्थामा विवाह गर्ने सपना हुन्छ । विवाह धूमधामले होस् उसको चहानना हुन्छ । तर, यस्तो एक ठाँउ रहेको छ जहाँ महिलाले विवाह गर्न निकै कठिन भएको छ । सो ठाँउमा सुन्दर महिलाहरुले पनि कुमार केटा पाउन सकेका छैनन् । ... बाँकी अंश»
विश्वको सबैभन्दा खतरानक ताल जसले जनावरलाई बनाउन सक्छ ढुङ्गा
२०७५ फाल्गुण ७ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वमा यस्तो एउटा ताल छ, जसको नजिक पुग्ने जीवजन्तु सबै ढुङ्गामा परिणत हुन्छन् । यहाँका केही पुराना तस्वीरले पनि यो कुरालाई पुष्टि गर्छ । नैट्रान नाम गरेको यो ताल उत्तर तान्जानियामा रहेको छ । ... बाँकी अंश»
टी-सीरीजले हटायो राहत र आतिफको गीत
२०७५ फाल्गुण ६ सोमबार, काठमाडौं । टी-सीरीजले १५ फेब्रुवरीमा पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खानको नयाँ गीत 'ज़िन्दगी' सार्वजनीक गर्ने तयारी गरेको थियो । अहिले म्युजिक कम्पनीले आफ्नो युट्युब च्यानलका साथै अन्य सोशल मीडियाबाट गायकको म्युजिक भिडियो हटाएको छ । पुलवामा आतंककारी आक्रमणपछि बलिउडले पाकिस्तानी कलाकारहरुलाई चिड्याउन थालेका हुन् । ... बाँकी अंश»
अमेरिकी टीभी होस्टले १० वर्षदेखि धोएनन् हात !
२०७५ फाल्गुण ३ शुक्रबार, काठमाडौं । मानिस स्वतन्त्ररुपमा जिउन चाहने प्राणी हो । जसको कारण उनीहरु सकेसम्म आफूलाई मन परेको काममा समय खर्चिने गर्छन् । यस्तैमा एक चर्चित व्यक्तिले आफूले १० वर्षसम्म हात नधोएको खुलासा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
एक यस्तो कोहिनूर जसलाई सिख राजाले भारत ल्याए, आक्रमण गरि अंग्रेजले लगे
२०७५ फाल्गुण २ बिहिबार, काठमाडौं । वास्तवमा कोहिनूर के हो र यो किन यति धेरै चर्चित छ भन्नेबारे अहिले पनि चर्चा हुने गरेको छ । यो हीरा भारतको पञ्जाबका राजा रणजित सिंहको थियो भने उनीसँग कसरी आयो ? यस विषयमा यहाँ केही चर्चा गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रासस प्रतिष्ठान शाखाले यस वर्षको रासस पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ समाचारदाता विष्णुप्रसाद ... बाँकी अंश»
यस्तो राजवंश जहाँ चार सय बर्षदेखि भएको छैन पुत्रको जन्म
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, काठमाडौं । विज्ञान र प्रविधिको अहिलेको युगमा मानिसहरु श्रापमा खासै विश्वास गर्दैनन् । भारतको एक राजवंशमा भने विगत ४०० वर्षदेखि पुत्र जन्मिएका छैनन् । जसको एकमात्र कारण एक रानीले यो राजवंशमा दिएको श्राप प्रमुख कारण रहेको बताइएको छ । ... बाँकी अंश»
यस्तो जेल जसको सुविधा सुनेर जो कोहिलाई जाग्न सक्छ कैदी बन्ने इच्छा
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, काठमाडौं । मानिसहरुको मनमा जेलको नाम सुन्नेबित्तकै एक कालकोठरीको याद आउँछ । जेलको नाम लिँदा मानिसहरुले अँध्यारो कोठाहरु भएको स्थान र बस्नको लागि निकै असजिलो हुने ठाउँको परिकल्पना धेरै मानिसहरुले गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
साबुनको फिँज सेतो नै किन ?
२०७५ फाल्गुण १ बुधबार, काठमाडौं । साबुन लगभग सबै मानिसहरुले प्रयोग गर्छन् । साबुन विभिन्न रङहरुमा उपलब्ध हुन्छ । तर तपाइँले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, सबै साबुनको फिँज किन सेतो हुन्छ ? ... बाँकी अंश»
प्रहरीको पोशाकबाट खल्ती हटाउने हल्ला
२०७५ माघ २९ मंगलबार, एजेन्सी। केन्या सरकारका अधाकरीहरुबीच केन्या प्रहरीको लुगामा खल्ती नराख्ने भन्ने छलफल भएको हल्ला चलेको छ । राष्ट्रपती कनेयाटाको भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानलाई सर्थक पार्न उनका समर्थकहरुले सो हल्ला चलाएको हुनसक्ने बताइएको छ । केन्यामा प्रहरी सबै भन्दा भ्रष्ट रहेको सर्वसाधारणले गुनासो गर्दै आएका छन् । ... बाँकी अंश»
चीनका व्यापारी वू रुईबाओले यति धेरै दिए छोरीलाई दाईजो बन्यो रेकर्ड !
२०७५ माघ २९ मंगलबार, काठमाडौं । चीनका व्यापारी टाइकुन वू रुईबाओले आफ्नी छोरीलाई दाईजोमा १३ सय ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति दिएर रेकर्ड बनाएका छन् । टायलका ब्यापारी टाइकुनले दाईजोको रुपमा यति ठूलो धनराशी दिएर एक रेकर्ड बनाएका हुन् । ... बाँकी अंश»
विश्वभर कसरी आयो कीराहरुको संख्यामा गिरावट ?
२०७५ माघ २९ मंगलबार, काठमाडौं । विश्वभर कीरा–फट्याङ्ग्राहरुको संख्यामा गिरावट आएको पाइएको छ । बायोलोजिकल कन्जरभेसन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर नै कीरा–फट्याङग्राहरुको संख्यामा नाटकीय ढंगले कमी आएको छ । ... बाँकी अंश»
चंगेजलाई पत्नी अपहरणको आक्रोश : मारे ४ करोड मान्छे, जिते विश्वको २२ प्रतिशत क्षेत्र
२०७५ माघ २८ सोमबार, काठमाडौं । चंगेज खानको नाम धेरैले सुन्दै आएका छन् । उसको क्रूरता र युद्ध कुशलताको विषयमा धेरैलाई राम्रो ज्ञान पनि छ । उनको इतिहास सबैभन्दा ठुलो आक्रमणकारी किसिमको थियो । उक्त क्रूर शासकबारे केही कहानीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ – चंगेज खानको मंगोलियन नाम चिंगिज खान थियो । उनले मंगोलियाको साम्राज्य विस्तारमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी आफ्नो संगठन, शक्ति बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तारको लागि प्रसिद्ध थिए । यसभन्दा पहिला कुनै पनि ययावर जातिको व्यक्तिले यति ठुलो विजय यात्रा गरेको थिएन । ... बाँकी अंश»
स्कुल बसको रङ पँहेलो नै किन ?
२०७५ माघ २८ सोमबार, काठमाडौं । मानिसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय बाल्यकाल नै हो । यो समयमा उनीहरुको काँधमा कुनै जिम्मेवारी हुन्छ भने त्यो पढाइको जिम्मेवारी हो । यस्तोमा स्कुलको विषयमा पनि धेरै बालबालिकाहरुको विषयमा कुरा हुने गर्छ । हाम्रो स्कुल यस्तो र उस्को स्कुल यस्तो भनेर उनीहरुको बीचमा धेरै चर्चा हुने गर्छ । तर सबै समान उनीहरुको स्कुलको बसको रङ हुन्छ । सबै स्कुलबसको रङ किन पँहेलो हुन्छ त ? ... बाँकी अंश»
छोटो कपडा लगाएर संसदमा आउने सांसदलाई रेप गर्ने चेतावनी
२०७५ माघ २६ शनिबार, काठमाडौं । एक महिला राजनेतालाई संसदमा छोटो कपडा लगाएर आएको भन्दै आक्रोशित एक व्यक्तिले सांसदमाथि रेप गर्ने धम्की समेत दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
यस्तो मन्दिर जहाँ हावामा अडिएका छन् खम्बा
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । संसारमा यस्ता धेरै मन्दिरहरु छन्, जसको आफ्नै विशेषता हुन्छ, जसमा केही भने अनौठो लाग्ने किसिमका हुन्छन् । भारतमा यस्तो मन्दिर छ, जहाँ मन्दिरका सबै खम्बाहरु हावामा अडिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ माघ २५ शुक्रबार, काठमाडौं । अमेरिकाको मिशिगनमा बस्ने एक दम्पत्तिले पछिल्लो नौ वर्षमा लोटरी जित्न सफल भएको खुलासा गरेका छन् । उनीहरुले सो अवधिमा २.६ करोड डलर अर्थात् झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँको लोटरी जितेका थिए । ... बाँकी अंश»